ကမ်ဘာပျေါကကွောကျစရာအကောငျးဆုံးနဲ့နာမညျအကွီးဆုံး အမြိုးသမီးတစ်ဆေ(၃)ကောငျ – Myanmar
September 16, 2020 admin Knowledge 0
ဒီတဈခါ ဗဟုသုတလညျးရ၊ သညျးထိတျရငျဖိုတှကေိုကွိုကျတဲ့ သူလေးတှအေတှကျ ကမ်ဘာပျေါက နာမညျအကွီးဆုံး အမြိုးသမီးတစ်ဆသေုံးဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရာဇဝငျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။.
(၁) La Llorona
ဒီအမြိုးသမီးကို ငိုနတေဲ့မိနျးမ လို့လညျး ချေါကွပါတယျ။ စပိနျ နဲ့ မက်ကဆီကိုကနပေေါကျဖှားလာတဲ့ အကွောငျးအရာလေးဖွဈတယျ။ မာရီယာလို့ချေါတဲ့ အမြိုးသမီးဟာ သူ့ခငျပှနျးအခွားမိနျးမနဲ့ ဖောကျပွနျနတော သိသှားပွီးတော့ လကျစားခတြေဲ့အနနေဲ့ သူ့ခငျပှနျးနဲ့ရထားတဲ့ ကလေးနှဈယောကျကို ရနှေဈပွီးသတျလိုကျပါတယျ။ ခဏအကွာမှာ သူ့ကိုယျသူလညျး ရနှေဈပွီး သတျသခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ဝိညာဉျကတော့ မကြှတျမလှတျပဲ သူ့ရဲ့ ကလေးတှကေို လိုကျရှာနတေယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ “ငါ့ရဲ့ကလေးတှဘေယျမှာလဲ” ဆိုပွီး သူပွောနတေဲ့ အသံကိုကွားတဲ့သူဟာ သရေတယျလို့လညျး ဆိုကွပါတယျ။
Kuchisake-Onna ဆိုတာဟာ ဂပြနျလိုဖွဈပွီး မွနျမာလို ပါးစပျပွဲနတေဲ့အမြိုးသမီး လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျရဲ့အစက အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျတဲ့မိနျးမဖွဈသူကို ယောကျြားဖွဈသူက ပါးစပျကို ဓါးနဲ့ဖွဲပွီး သတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ့နောကျမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဝိညာဉျက မကြှတျမလှတျတော့ပဲ မွို့တှငျးကလူတှကေို လိုကျခွောကျပါတော့တယျ။ သူ့ရဲ့ ပွဲနတေဲ့ပါးစပျကွီးကိုပွပွီး “ကြှနျမလှလား” လို့မေးတတျပါတယျ။ လှတယျပဲပွောပွော၊ မလှဘူးပဲပွောပွော သူတို့ရဲ့ ပါးစပျကို သူ့လိုပဲ ဖွဲပဈပါတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
နောကျထပျ အမြိုးသမီးတစ်ဆကေတော့ Sister Marie Inconnue ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ကနဒေါနိုငျငံက ခေါငျးပွတျတစ်ဆေ လို့ နာမညျကွီးတဲ့ အမြိုးသမီးဖွဈပါတယျ။ သက်ကရာဇျ ၁၇၀၀ လောကျကတညျးက ပွောစမှတျပွုလာကွတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုပါ။ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ပွောကွပမေယျ့ အကွောငျးအရာကတော့ အတူတူပါပဲ။ စိတျမနှံ့တဲ့ မုဆိုးတဈယောကျက သီလရှငျရဲ့ ခေါငျးကိုဖွတျပွီး တောအုပျထဲကိုယူပွေးသှားတယျ။ အဲဒီ့အခြိနျကစပွီး သူ့ဝိညာဉျက မကြှတျတော့ပဲ သူ့ဦးခေါငျးကို ပွနျရပွီး ကိုယျအင်ျဂါအစိတျအပိုငျး အပွညျ့စုံမခငျြး သူ့ခေါငျးကိုလိုကျရှာနဦေးမယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
ဒီတစ်ခါ ဗဟုသုတလည်းရ၊ သည်းထိတ်ရင်ဖိုတွေကိုကြိုက်တဲ့ သူလေးတွေအတွက် ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်အကြီးဆုံး အမျိုးသမီးတစ္ဆေသုံးဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရာဇဝင်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။.
ဒီအမျိုးသမီးကို ငိုနေတဲ့မိန်းမ လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ စပိန် နဲ့ မက္ကဆီကိုကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်။ မာရီယာလို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သူ့ခင်ပွန်းအခြားမိန်းမနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာ သိသွားပြီးတော့ လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ သူ့ခင်ပွန်းနဲ့ရထားတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို ရေနှစ်ပြီးသတ်လိုက်ပါတယ်။ ခဏအကြာမှာ သူ့ကိုယ်သူလည်း ရေနှစ်ပြီး သတ်သေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဝိညာဉ်ကတော့ မကျွတ်မလွတ်ပဲ သူ့ရဲ့ ကလေးတွေကို လိုက်ရှာနေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ “ငါ့ရဲ့ကလေးတွေဘယ်မှာလဲ” ဆိုပြီး သူပြောနေတဲ့ အသံကိုကြားတဲ့သူဟာ သေရတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
Kuchisake-Onna ဆိုတာဟာ ဂျပန်လိုဖြစ်ပြီး မြန်မာလို ပါးစပ်ပြဲနေတဲ့အမျိုးသမီး လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အစက အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမဖြစ်သူကို ယောက်ျားဖြစ်သူက ပါးစပ်ကို ဓါးနဲ့ဖြဲပြီး သတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဝိညာဉ်က မကျွတ်မလွတ်တော့ပဲ မြို့တွင်းကလူတွေကို လိုက်ခြောက်ပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ ပြဲနေတဲ့ပါးစပ်ကြီးကိုပြပြီး “ကျွန်မလှလား” လို့မေးတတ်ပါတယ်။ လှတယ်ပဲပြောပြော၊ မလှဘူးပဲပြောပြော သူတို့ရဲ့ ပါးစပ်ကို သူ့လိုပဲ ဖြဲပစ်ပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
နောက်ထပ် အမျိုးသမီးတစ္ဆေကတော့ Sister Marie Inconnue ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကနေဒါနိုင်ငံက ခေါင်းပြတ်တစ္ဆေ လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ သက္ကရာဇ် ၁၇၀၀ လောက်ကတည်းက ပြောစမှတ်ပြုလာကြတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောကြပေမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အတူတူပါပဲ။ စိတ်မနှံ့တဲ့ မုဆိုးတစ်ယောက်က သီလရှင်ရဲ့ ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီး တောအုပ်ထဲကိုယူပြေးသွားတယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကစပြီး သူ့ဝိညာဉ်က မကျွတ်တော့ပဲ သူ့ဦးခေါင်းကို ပြန်ရပြီး ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပြည့်စုံမချင်း သူ့ခေါင်းကိုလိုက်ရှာနေဦးမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဆေးရုံ(၄)ရုံမှာ စောငျ့ကွညျ့လူနာတှထေားနိုငျဖို့ ငှကေပျြသိနျး(၈၀၀) လှူခဲ့တဲ့ ခဈြသုဝေ
ရဟနျး လှူသော ဆှမျး 🙏 (ပွညျသူဒုက်ခရောကျတော့ ဘုနျးဘုနျးတို့လဲ မနနေိုငျတော့ဘူး)